Waa maxay cadaadiska Hawada iyo sidee u shaqeeyaa? | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Ciencia, Qalabka Saadaasha hawada, Saadaasha hawada
Saadaasha hawada, cadaadiska Hawada Waa wax aad muhiim u ah in la tixgeliyo marka la saadaalinayo lana baranayo dhaqanka cimilada. Daruuro, duufaano, duufaano, dabaylo, iwm. Badanaa waxaa shuruud ku leh isbeddelada ku yimaada cadaadiska Hawada.
Si kastaba ha noqotee, cadaadiska Hawada ma ahan wax la taaban karo, waa wax lagu arki karo isha qaawan, sidaa darteed waxaa jira dad badan oo fahamsan fikradda, laakiin dhab ahaan aan aqoon waxa ay tahay.
1 Waa maxay cadaadiska Hawada?
2 Waa maxay cutubyadee lagu cabiraa cadaadiska Hawada?
3 Sidee loo cabiraa cadaadiska Hawada
4 Cadaadiska Hawada iyo joogga
4.1 Waa maxay cadaadiska heerka badda?
5 Sidee cadaadiska hawadu u saameeyaa jirkeena?
6 Cadaadis iyo xasilooni darrada jawiga ama xasilloonida
7 Deganaansho ama Duufaan
8 Duufaan ama duufaan
9 Cimilada iyo khariidadaha cadaadiska cimilada
10 Weji qabow
11 Jihooyinka diiran
Waa maxay cadaadiska Hawada?
Xitaa haddii ay u muuqato inay maya tahay hawadu way culustahay. Kama war qabno culeyska hawadda tan iyo markii aan ku dhex quusnay. Hawada ayaa bixisa iska caabin marka aan soconno, orodno ama aan raacno gaari, maxaa yeelay, sida biyaha oo kale, waa dhexdhexaad aan ku dhex soconno. Cufnaanta biyuhu aad ayey uga badan tahay tan hawada, waa taas sababta ay noogu adag tahay inaan ku dhaqaaqno biyaha.
Si uun, hawadu xoog ayey noo saartaa annaga iyo wax walba. Sidaa darteed, Waxaan u qeexi karnaa cadaadiska Hawada inay tahay awooda ay ku shaqeyso hawo hawo leh dusha sare ee dhulka. Sare u kaca dhererka dusha sare ee dhulka marka loo eego heerka badda, ayaa hoos u dhigaya cadaadiska hawada.
Waa maxay cutubyadee lagu cabiraa cadaadiska Hawada?
Waa wax caqli gal ah in laga fikiro in hadii cadaadiska cimilada ay sabab u tahay culeyska hawadu ka jirto meel cayiman oo dhulka korkiisa ah, waa inaan u qaadano in halka dhibicdu ka sarayso ay tahay, cadaadiska hoose uu noqon doono, maadaama qadarka hawo halkii cutubba sidoo kale ka yar yahay. kor ku xusan. Cadaadiska Hawada waxaa lagu cabiraa sida xawaaraha, miisaanka, iwm. Waxaa lagu cabiraa jawiga, millibars, ama mm Hg (milimitir meerkuris ah). Caadi ahaan cadaadiska jawiga ee ka jira heerka badda waxaa loo qaadaa tixraac ahaan. Halkaas waxay ku qaadataa qiime 1 jawi, 1013 millibars ama 760 mm Hg iyo litir hawo ah oo culeyskiisu yahay 1,293 garaam. Unugga ay inta badan adeegsadaan khubarada saadaasha hawadu waa kan loo yaqaan 'millibars'.
Sidee loo cabiraa cadaadiska Hawada
Si aad u awoodo inaad cabirto cadaadiska dareeraha, qiyaasaha cadaadiska. Waxa ugu ballaaran ee la isticmaalo uguna fudud in la isticmaalo waa manometer-ka furan. Asal ahaan waa tuubo U-qaabeysan oo dareere ku jiro. Mid ka mid ah darafka tuubbada waxay ku jirtaa cadaadiska in la cabiro kan kalena wuxuu la xiriiraa jawiga.
para Cabbir hawo ama cadaadiska jawiga adigoo isticmaalaya barometer. Waxaa jira barometerro noocyo kala duwan ah. Tan ugu wanaagsan ee la ogyahayna waa barometerka meerkuriga ee uu allifay Torricelli. Waa tuubo U-qaabeysan oo leh laan xiran oo faaruqinta lagu soo jiiday, sidaa darteed cadaadiska qaybta ugu sarreysa ee laantani waa eber. Sidan oo kale, xoogga ay hawadu saarto tiirka dareeraha ah waa la cabbiri karaa oo lagu cabbiri karaa cadaadiska Hawada
Sidii aan horay uga faallaynay, cadaadiska jawiga waxaa sabab u ah culeyska hawadu dul marayso meel ka mid ah dhulka dushiisa, sidaa darteed, bartaani waa ka saraysa, hoos u dhig cadaadiska, maadaama ay ka yartahay tirada hawada ee jirta. Waxaan dhihi karnaa in cadaadiska Hawada uu hoos u dhacayo joogga sare. Tusaale ahaan, buur, xaddiga hawo ee qaybta ugu sarreysa way ka yar tahay tan xeebta, kala duwanaanshaha dherer ahaan.
Tusaale kale oo sax ah ayaa ah kuwan soo socda:
Heerka badda waxaa loo qaatay tixraac ahaan, halkee Cadaadiska Hawada wuxuu leeyahay qiyam dhan 760 mm Hg. Si loo hubiyo in cadaadiska cimilada uu dhererkiisu hoos u dhacayo, waxaan aadeynaa buur dhererkeedu ugu sareeyo uu qiyaastii 1.500 mitir ka sarreeyo heerka badda. Waxaan fulineynaa cabirka oo waxaa ii soo baxday in dhererkaas, cadaadiska jawiga uu yahay 635 mm Hg. Tijaabadan yar, waxaan ku hubinaynaa in xaddiga hawada ee buurta ugu sarreysa ay ka yar tahay tan heerka badda oo sidaas darteed, awoodda ay hawadu ku bixiso dusha sare iyo annaguba way ka yar tahay.
Cadaadiska Hawada iyo joogga
Qodob muhiim ah oo maskaxda lagu hayo waa cadaadiska Hawada dherer ahaan uma dhimo mar hadday hawadu tahay dheecaan si xoog leh loo cadaadin karo. Tani waxay sharraxeysaa in hawada ugu dhow dhulka dushiisa lagu cadaadiyo culeyska hawadu leedahay. Taasi waa, lakabyada hawada ugu horreeya ee dhulka ku dhow waxaa ku jira hawo badan waxaa lagu riixayaa hawada sare (hawada dusha sare ayaa ka cufan, maaddaama ay hawo badan tahay halkii cabbirkiiba), sidaa darteed cadaadiska ayaa ka sarreeya dusha sare oo hoos ugama dhimayo tan iyo inta Hawada si joogto ah uma dhimayso dhererkeeda.
Sidan waxaan dhihi karnaa ku dhowaanshaha heerka badda, sameynta jaranjarooyinka yar ee dhererka ayaa sababa hoos u dhac weyn oo cadaadiska ah, inta aan sare u kacno, waxaan u baahanahay inaan aad u sareyno si aan ula kulanno hoos u dhac ku yimaada cadaadiska cimilada isla heerkaas.
Cufnaanta hawada sare
Waa maxay cadaadiska heerka badda?
Cadaadiska atmosfeerka ee heerka badda waa 760mmHg, oo u dhiganta 1013 millibaar. Joogga sare, cadaadiska ayaa hoos u dhacaya; dhab ahaantii waxaa lagu dhimayaa 1mb mitir kasta oo aan kor u qaadno.
Sidee cadaadiska hawadu u saameeyaa jirkeena?
Caadi ahaan waxaa jira isbeddelo ku yimaada cadaadiska Hawada markii ay jiraan duufaanno, degganaansho hawo-waaga ama dabeylo xoog leh. Fuulashada dhererka ayaa sidoo kale saameysa jirka. Buuraleyda ayaa ah dadka dhibaatada ugu badan ka soo gaarto astaamaha noocan ah sababo la xiriira isbeddelada ku dhaca cadaadiska markii ay fuulayaan buuraha.
Calaamadaha ugu caansan waa madax xanuun, calaamadaha caloosha, daciifnimo ama daal, fadhiidnimo ama wareer, hurdo xumo, iyo kuwo kale. Qiyaasta ugu wax ku oolka badan ee ka soo horjeedka muuqaalka astaamaha cudurka buurta waa soo dhaca meelaha hoose, xitaa haddii ay yihiin dhowr boqol oo mitir oo keliya.
Dad badan oo buur fuula ayaa la xanuunsada madax xanuun markay aad u koraan.
Cadaadis iyo xasilooni darrada jawiga ama xasilloonida
Hawada waxay leedahay xoogaa dhaqdhaqaaq ah oo fudud waxayna la xiriirtaa cufnaanteeda iyo heerkulkeeda. Hawo diiran ayaa ka yar cufan, hawo qabowna waa mid cufan. Taasi waa sababta markii hawadu qabowdo ay u janjeerto inay hoos u dhacdo joog iyo ka soo horjeedba markay kululaato. Dhaqdhaqaaqa hawadan wuxuu sababa isbeddelo ku yimaada cadaadiska Hawada oo sababa xasillooni darro ama xasilloonida deegaanka.
Deganaansho ama Duufaan
Marka hawadu qabowdo oo hoos u soo degto, cadaadiska jawiga ayaa kordha maaddaama ay hawo badan tahay dusha sare sidaas darteed, waxay sameysaa xoog badan. Tani waxay keentaa a xasiloonida Hawada ama sidoo kale loo yaqaan 'anticyclone'. Xaaladda xinjirowga lidka ku ah Waxaa lagu gartaa inay tahay aag xasilloon, oo aan dabeylo lahayn tan iyo markii hawada ugu qabow uguna culus ay si tartiib ah ugu degto jihada wareegsan. Hawada ayaa ku wareegeysa ugu yaraan si aan macquul aheyn saacad ahaan dhanka woqooyi iyo dhanka saacada dhanka koonfureed.
Anticyclone oo ku taal khariidada cadaadiska cimilada
Duufaan ama duufaan
Taas bedelkeeda, marka hawada kulul ay kacdo, waxay yareysaa cadaadiska jawiga waxayna keentaa degganaan la’aan. Waxaa loo yaqaan duufaan ama duufaan. Dabayshu had iyo jeer waxay u dhaqaaqdaa jihada doorbidista aagagga leh cadaadiska hoose ee jawiga. Taasi waa, markasta oo aag duufaan leeyahay, dabayshu way sii sarreysaa, sababtoo ah inay tahay aag cadaadiskiisu yar yahay, dabayshu halkaasay aadi doontaa.
Duufaan ka socota khariidada cadaadiska cimilada
Muuqaal kale oo maskaxda lagu hayo ayaa ah in hawo qabow iyo hawo kulul aysan isla markiiba isku qasin cufnaanta ay leeyihiin awgeed. Markay kuwani dusha sare ku jiraan, hawo qabow ayaa hawo diirran kor ugu riixaysa taasoo keenta dhibco cadaadis iyo degganaan la'aan ah. Dabadeed duufaan ayaa samaysmay taas oo aagga aagga u dhexeeya hawo kulul iyo qabow la yiraahdo hore.
Cimilada iyo khariidadaha cadaadiska cimilada
ka khariidadaha cimilada waxaa sameeya khubarada saadaasha hawada. Si tan loo sameeyo, waxay adeegsadaan macluumaadka ay ka soo ururiyaan xarumaha cimilada, diyaaradaha, buufinnada dhawaqa iyo dayax gacmeedyada. Khariidadaha la soo saaray waxay matalayaan xaaladaha cimilada ee dalal iyo aagag kala duwan oo la soo bartay. Qiyamyada ifafaalaha saadaasha hawada qaarkood sida cadaadiska, dabaysha, roobka, iwm.
Khariidadaha cimilada ee xilligan na xiiseynaya ayaa ah kuwa ina tusaya culeysyo hawo leh. Khariidadda cadaadiska Khadadka isku midka ah cadaadiska jawiga waxaa loo yaqaan isobars. Taasi waa, sida cadaadiska hawadu isu bedesho, khadad badan oo isobar ah ayaa ka muuqan doona khariidada. Jihooyinka ayaa sidoo kale ka muuqda khariidadaha cadaadiska. Waad ku mahadsan tahay khariidadaha noocan ah waxaa suurtagal ah in la go'aamiyo sida cimiladu tahay iyo sida ay isu beddeli doonto saacadaha soo socda iyada oo aad loogu kalsoonaan karo, illaa xadka saddexda maalmood ah.
Khariidadahan, meelaha leh cimilada ugu sareysa cimilada waxay muujinayaan xaalad ka hortag ah iyo meelaha ugu cadaadiska yar duufaano. Jihooyinka kulul iyo qabowga waxaa lagu gartaa astaamo waxayna saadaaliyaan xaalada aan ku sugnaan doono maalinta oo dhan.
ka foodda qabow waa kuwa ay ku jiraan cufnaanta hawada qabow waxay beddeleysaa hawo kulul. Way xoogan yihiin waxayna sababi karaan khalkhalka jawiga sida duufaanka, roobka, duufaannada, dabeylo badan, iyo duufaanno gaagaaban kahor intaan qabowga hore dhaafin, oo ay weheliso xaalado qalalan marka hore loo socdo. Waxay kuxirantahay waqtiga sanadka iyo juqraafi ahaan, jihooyinka qabow waxay ku imaan karaan isku xigxiga 5 ilaa 7 maalmood.
ka foodda diiran waa kuwa ay ku jiraan tiro hawo diiran ayaa si tartiib tartiib ah u beddeleysa hawada qabow. Guud ahaan, marinka hore ee diiran, heerkulka iyo huurka ayaa kordha, cadaadiska ayaa hoos u dhaca oo in kastoo dabayshu is bedesho, haddana uma dhawaaqo sida marka wejiga hore ee qabow uu u gudbo. Roobab qaab roob, baraf ama qulqulaya ayaa guud ahaan laga helaa bilowga hore ee dusha sare, iyo sidoo kale roobab isdaba joog ah iyo duufaanno.
Iyada oo la adeegsanayo dhinacyadan aasaasiga ah ee saadaasha hawada, waxaad horayba u ogaan kartaa si fiican waxa cadaadiska hawadu yahay iyo sida uu ugu shaqeeyo dhulkeenna. Si si fiican loo ogaado waxa ay khubarada saadaasha hawadu noo sheegaan ee saadaalinta cimilada iyo in aan awood u yeelanno falanqaynta iyo fahamka jawigeenna inbadan.
Raadi wax walba oo ku saabsan barometerka, aaladda lagu cabbiro cadaadiska jawiga:
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Waa maxay cadaadiska Hawada iyo sidee u shaqeeyaa?
Cadaadis noocee ah ayaa ka jira meesha ugu sareysa ee ay diyaaradaha ganacsi ku safraan?
Ma jirtaa ama miyaad taqaan garaaf kasta oo muujinaya kala duwanaanta cadaadiska badda iyo bixitaanka jawiga?
Jawaab Rodolfo Gabriel David
Saa'uul leyva dijo
Maqaal aad u wanaagsan. Hambalyo.Waxaan ka jawaabayaa su'aashayda.
Jawaab Saul Leyva